> Resource > Video > Sidee Hoose Volume faylasha Warbaahinta
Mararka qaarkood maqal ah ee files warbaahinta aad u cod weyn aan loo eegayn inta aad hoos u codka ku hadla aad. Waayo mararka qaarkood il video laftiisa uu ahaa mid aad u xasilloon, ama waxaa la encoded ee mugga weyn ku dhawaaqay. Inkastoo files warbaahinta soo qaabab badan oo kala duwan, hab loogu talagalay hoose mugga waa mid fudud iyo universal. Isticmaalka barnaamij video tafatir sida Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) (ama Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ), waxaad si fudud u qaadi doonto faa'idada Tifaftiraha audio gudahood barnaamijka hoos u mugga. Halkan waxay leedahay Hanuuniye tallaabo-tallaabo inuu kuu sheego sida ay u hoos mugga ee files warbaahinta.
1 dar files warbaahinta aad rabto in aad hoos u mugga
Ka dib markii ay soo degsado iyo ordaya barnaamijkan, guji "Import" si ay u bilaabaan soo degida faylasha. Marxaladani waxay badanna wuu qaadan dhowr ilbiriqsi taas oo ku xiran ee file warbaahinta. Markaas file ka dhex muuqan doonaa "User ee Album" barnaamijka. Jiid faylka keeno si Timeline ah.
2 mugga Hoose oo ka mid ah files warbaahinta
Double guji file bartilmaameedka iyo "ayeey" Window muuqan doonaa. Markaas beddelaan si ay "Audio" column, yareeyaan xaddiga by jiidayeen slider heerka mugga tagay. Ha ka walwalin haddii aadan helin codka xaq markii ugu horeysay. Waxaad dib kartaa mugga adigoo riixaya "Dib u celi" button. Ka dib markii la qabsado mugga, guji icon play si ay u dhagaystaan ​​saamaynta.
Talo: Waxaa jira hawlaha ka badan khaanada, sida ku baxayn ee / libdhi soo baxay, hufay garoonka, iwm Haddii aad rabto in aad ku darto saamaynta dheeraad ah, u tag "Video" column inay isku shaandheyn, qabsato duwan, saturation, dhalaalka, saa- iyo xawaaraha video ah.
3 Save faylasha
Markaasuu ku dhufatey "Abuur" icon si loo badbaadiyo files badbadeley. Waxaad si qaabab kala duwan sida wmv, MOV, AVI, MKV, MP4 badbaadin karo files ama inuu ciyaaro qalab kala duwan sida iPhone, iPad, PSP iyo Zune badbaadiyo. Si tan loo sameeyo, si ay u beddelaan tab ee la xidhiidha, ee ka gala goobaha horena iyo saxaafadda "Abuur" si ay u bilaabaan dhoofinta. File la dhoofiyo waa in ay leeyihiin video mid ah, laakiin la audio buunkii. Waxa kale oo aad ku gubi karaa files si ay u DVD ama si toos ah u geliyaan in YouTube haddii aad dooratid.
Eeg, waa way fududahay in la hoos u mugga files warbaahinta. Ka sokow hawsha, taas oo awood leh qalab video tafatirka ay sidoo kale taageertaa falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray saamaynta video iyo culaysyo ka badan. Hadda kaliya download it iyo sahamin muuqaalada dheeraad ah waxaa ka mid ah!